ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ ဘာလို့ ထည့်သွင်းထားတာတုန်း။ - Barnyar Barnyar
March 13, 2022 Religious 0
ဘုရားထဲမှာ တနျဖိုးရှိတဲ့ အရာတှေ ဘာလို့ ထညျ့သှငျးထားတာတုနျး။
တဈခြို့လညျးပဲ စဉျးစားခငျြမှ စဉျးစားမှာ။ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယျ။ ဌာပနာဆိုတာ… ထညျ့သှငျးတာ၊ ထညျ့သှငျးခွငျး တညျထားခွငျးလို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
အဲဒီတော့ ရတနာတှေ ဘာကိစ်စဘုရားထဲမှာ ထညျ့ကွတာတုနျး။ နိုငျငံခွားသားတှေ အမွငျနဲ့ ကွညျရငျတော့ ဒါဟာ အကြိုးမရှိဘူးလို့ ပွောမှာပေါ့နျော။ ဒါတှထေညျ့လိုကျလို့ ဘာအကြိုးရှိမှာတုနျး။
ဘုရားရုပျပှား ဆငျးတုတျော ထညျ့တာတော့ ထားပါတော့။ ရတနာတှေ ထညျ့တယျ။ အခုခတျေညျး ထညျ့တာပဲ။ ကွညျညိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ ကိုယျ့သဒ်ဓါတရားနဲ့ ကိုယျ ထညျ့ကွတယျ။ ဘာအတှကျ ထညျ့တာလဲဆိုတော့ ကွညျညိုလို့ လှူတာပဲ သိတယျ။
သို့သျော… တကယျ့အစဈအမှနျက ရညျရှယျခကျြ ရှိတယျ။ မွတျစှာဘုရား ပရိနိဗ်ဗာနျစံတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ ဓာတျတျောတှကေို ရှဈပွညျထောငျမငျးတှကေို ခှဲဝပွေီး ပေးလိုကျတယျ။ ဓာတျတျောတှကေ ရှဈပွညျထောငျတောငျ ရောကျသှားတယျ။
ဒီဓာတျတျောတှကေို အန်တရာယျဖွဈမှာစိုးလို့ အရှငျမဟာကဿပတို့က အဇာတသတျမငျးနဲ့ တိုငျပငျပွီးတော့ဓာတျတျောတိုကျကွီး တဈခုလုပျပွီး ဓာတျတျောတှေ စုထညျ့ထားတယျတဲ့။ အဲဒီလို စုထညျ့ထားပွီး အငျမတနျ တနျဖိုးရှိတဲ့ ပတ်တမွား တဈလုံးကို အဲဒီထဲမှာ ထညျ့ထားပွီး စာရေးထားတယျ။
နောငျတဈခြိနျကရြငျ… ဒီဓာတျတျောတိုကျကွီး ပကျြစီးသှားရငျ ပွငျဆငျဖို့အတှကျ ငှကွေေး မတတျနိုငျဘူးဆိုရငျ ဒီပတ်တမွားတုံးကွီးကို ရောငျးခပြွီး ပွုပွငျပါတဲ့။ အဲဒီတော့ ရတနာတှေ ထညျ့သှငျးထားခဲ့တယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျဟာ… သင်ျခါရသဘောတရားအရ တဈနကြေ့ ပကျြမှာပဲ။
maintenance လိုတယျလေ။ maintenance အတှကျ ထညျ့ခဲ့တာ။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရငျတော့ ရညျရှယျခကျြ ကောငျးတယျပေါ့.. maintenance အတှကျ deposit လုပျထားခဲ့တာ။ ဒါတှကေိုယူပွီး ဘုရားပွငျရမယျပေါ့။ အဲဒီ ရညျရှယျခကျြပဲ။
နောကျပိုငျးကတြော့… ဒီရညျရှယျခကျြက တဖွညျးဖွညျး ပြောကျလာတဲ့ သဘောပဲ။ မွနျမာပွညျမှာ… ကုသိုလျရှငျတှေ ဆိုငျးဘုတျ ထိုးလေ့ ရှိကွတယျလေ။ ဘုရားတံတိုငျးတို့ ဘာတို့ ညာတို့ အကုနျလုံးပေါ့။
ကုသိုလျရှငျတှေ ဘာလို့ ထိုးတာတုနျး-? နာမညျ ကွျောငွာတာလား။ ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲ။ ကိုယျ့ကို လူသိစခေငျြလို့ ထိုးတာလား။ မသိလညျး ဘာဖွဈလဲ-? လှူတာက လှူတာပဲပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆိုငျးဘုတျထိုးခွငျးရဲ့ ရညျရှယျခကျြက ဘာလဲဆိုရငျ အမြှဝတေဲ့သဘော၊ မွငျတဲ့ပုဂ်ဂိလျက သာဓုချေါရအောငျလို့။ ဒါ့ကွောငျ့မို့… ရှေးတုနျးက မိသားစုကောငျးမှုဆိုတာရဲ့ နောကျမှာ… နတျလူ သာဓုချေါစသေျော ဆိုတာလေး ပါတယျ။
အခုခတျေကတော့… အဲဒီ နတျလူသာဓု ချေါစသေျောဆိုတာလေး ပြောကျသှားပွီး နာမညျကွျောငွာတာ ဖွဈသှားတယျ။ ဒါက ပွောငျးလဲလာတဲ့ သဘောပေါ့နျော။
မူရငျးအဓိပ်ပါယျ ပြောကျသှားပွီးတော့ ပွောငျးလဲလာတဲ့ သဘောဟာ ဒီလိုပဲ ရှိတယျပေ့ါ။ စပွီးလုပျတဲ့ အခြိနျကတော့ အဓိပ်ပါယျရှိတယျ။ အဲဒီအဓိပ်ပါယျရှိတာတှဟော နောကျပိုငျး အဓိပ်ပါယျ မသိတော့ဘူး။ တဈမြိုးတဈမညျ ပွောငျးလဲသှားတတျတယျ။
တစ်ချို့လည်းပဲ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမှာ။ ဘုရားထဲမှာ ဌာပနာတယ်။ ဌာပနာဆိုတာ… ထည့်သွင်းတာ၊ ထည့်သွင်းခြင်း တည်ထားခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ဘာကိစ္စဘုရားထဲမှာ ထည့်ကြတာတုန်း။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အမြင်နဲ့ ကြည်ရင်တော့ ဒါဟာ အကျိုးမရှိဘူးလို့ ပြောမှာပေါ့နော်။ ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ ဘာအကျိုးရှိမှာတုန်း။
ဘုရားရုပ်ပွား ဆင်းတုတော် ထည့်တာတော့ ထားပါတော့။ ရတနာတွေ ထည့်တယ်။ အခုခေတ်ည်း ထည့်တာပဲ။ ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်သဒ္ဓါတရားနဲ့ ကိုယ် ထည့်ကြတယ်။ ဘာအတွက် ထည့်တာလဲဆိုတော့ ကြည်ညိုလို့ လှူတာပဲ သိတယ်။
သို့သော်… တကယ့်အစစ်အမှန်က ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါ ဘုရားရဲ့ ဓာတ်တော်တွေကို ရှစ်ပြည်ထောင်မင်းတွေကို ခွဲဝေပြီး ပေးလိုက်တယ်။ ဓာတ်တော်တွေက ရှစ်ပြည်ထောင်တောင် ရောက်သွားတယ်။
ဒီဓာတ်တော်တွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အရှင်မဟာကဿပတို့က အဇာတသတ်မင်းနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်တိုက်ကြီး တစ်ခုလုပ်ပြီး ဓာတ်တော်တွေ စုထည့်ထားတယ်တဲ့။ အဲဒီလို စုထည့်ထားပြီး အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပတ္တမြား တစ်လုံးကို အဲဒီထဲမှာ ထည့်ထားပြီး စာရေးထားတယ်။
နောင်တစ်ချိန်ကျရင်… ဒီဓာတ်တော်တိုက်ကြီး ပျက်စီးသွားရင် ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ငွေကြေး မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီပတ္တမြားတုံးကြီးကို ရောင်းချပြီး ပြုပြင်ပါတဲ့။ အဲဒီတော့ ရတနာတွေ ထည့်သွင်းထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ… သင်္ခါရသဘောတရားအရ တစ်နေ့ကျ ပျက်မှာပဲ။
maintenance လိုတယ်လေ။ maintenance အတွက် ထည့်ခဲ့တာ။ ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတယ်ပေါ့။ maintenance အတွက် deposit လုပ်ထားခဲ့တာ။ ဒါတွေကိုယူပြီး ဘုရားပြင်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ။
နောက်ပိုင်းကျတော့… ဒီရည်ရွယ်ချက်က တဖြည်းဖြည်း ပျောက်လာတဲ့ သဘောပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ… ကုသိုလ်ရှင်တွေ ဆိုင်းဘုတ် ထိုးလေ့ ရှိကြတယ်လေ။ ဘုရားတံတိုင်းတို့ ဘာတို့ ညာတို့ အကုန်လုံးပေါ့။
ကုသိုလ်ရှင်တွေ ဘာလို့ ထိုးတာတုန်း-? နာမည် ကြော်ငြာတာလား။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ ကိုယ့်ကို လူသိစေချင်လို့ ထိုးတာလား။ မသိလည်း ဘာဖြစ်လဲ-? လှူတာက လှူတာပဲပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆိုင်းဘုတ်ထိုးခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုရင် အမျှဝေတဲ့သဘော၊ မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိလ်က သာဓုခေါ်ရအောင်လို့။ ဒါ့ကြောင့်မို့… ရှေးတုန်းက မိသားစုကောင်းမှုဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ… နတ်လူ သာဓုခေါ်စေသော် ဆိုတာလေး ပါတယ်။
အခုခေတ်ကတော့… အဲဒီ နတ်လူသာဓု ခေါ်စေသော်ဆိုတာလေး ပျောက်သွားပြီး နာမည်ကြော်ငြာတာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘောပေါ့နော်။
မူရင်းအဓိပ္ပါယ် ပျောက်သွားပြီးတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘောဟာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်ပေ့ါ။ စပြီးလုပ်တဲ့ အချိန်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပါယ်ရှိတာတွေဟာ နောက်ပိုင်း အဓိပ္ပါယ် မသိတော့ဘူး။ တစ်မျိုးတစ်မည် ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။
Total Visit : 58231
Total Hits : 333176